Budata Grumman S2F-3 Tracker FSX & P3D Ngwugwu - Rikoooo
Milton Shupe - Eagle Rotorcraft anwale
Emelitere na 17 / 03 / 2019 : Ugbu a kwekọrọ na Prepar3D v4, Installer v10.5
Nke mbu emebere maka FS2004 site na Milton Shupe, nke a FSX Grumman S2F-3 bụ FSX nkwalite ala nna na mbụ. Na FSX S2F-3 zuru oke FSX/P3D dakọtara ma na-enweta uru nke ọtụtụ FSXnjikwa ihe ngosi
Onye Grumman S-2 Tracker (nke a na-akpọ S2F) bụ ụgbọelu mbụ ụgbọelu nke e wuru maka agha agha na-alụ agha (ASW) iji banye ọrụ na United States Navy. Onye bu ya ụzọ, AF-2 Guardian bụ nke mbụ e wuru maka agha agha agha, ma ọ na-eji nsụgharị abụọ, ihe ndị na-achọ ịnya ụgbọ na ngwá agha ndị ọzọ.
S-2 bụ ugbu n'ụdị a ejima-engine, elu-nku na ike elongations. Ọ na-onwem na tricycle ọdịda gia, abụọ propellers Wright ajọ ifufe kpara R-1820 arụ ọrụ atọ bladed propellers.
2 liveries - gbaara ọsọ wee USN
DirectX 10 Ò Kwekọrọ n'Ozizi
Onye edemede: Milton Shupe - Eagle Rotorcraft anwale